Home Wararka (War bixin) Halka Ay Kala Yaalaan Kuraasta Golaha Shacabka iyo Caqabadda 40-ka...
(War bixin) Halka Ay Kala Yaalaan Kuraasta Golaha Shacabka iyo Caqabadda 40-ka Maalin
Waxaa maanta bilaabanaya mudada 40-ka cisho ah ee loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka baarlamanka 11-aad.
Ilaa iyo hadda waxaa la doorto in ka yar 35 kursi oo ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo qaarkood ay muran iyo buuq ka taagan yihiin.
Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa shir isbuuc uga socday Muqdisho ay ku soo gabagabeeyeen 9-kii Janaayo ku sheegay in kama dambeys la soo afmeerayo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 25-ka bisha soo socota.
Gaalkacayo: Magaalada Gaalkacayo waxaa taalla 11- kursi oo ka tirsan golaha shacabka taas oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay xiisad cusub
Next articleGudoomiyaha Guddiga doorashooyinka heer Federaal oo la doortay